EtiMnga 9, 2018 Denial245
Hey, guys Hi!!! Ukuba unayo umbuzo engqondweni yakho indlela ukufumana imvume yokungena kwi 192.168.0.1 ikheli IP? kwaye Ngaba ufuna ukwazi ngayo 192.168.0.1 Ngema inkqubo, ewe ke akukho mfuneko ukuba uyazibuza okanye babe nexhala kwakhona? ukuba apha kweli nqaku weSiqendu sam, Ndiya kuyibalisa yonke indlela kunye nenkqubo ukuba ukufikelela 192.168.0.1.
Yintoni i 192.168.0.1?
192.168.0.1 i idilesi ye IP yabucala ye Internet Protocol version 4 (IPv4) inethiwekhi (Kuba eyaziwa ngokuba iidilesi host kwinzululwazi yekhompyutha). Yeyona idilesi kuqwalaselo olungagqibekanga IP imizila engenazingcingo okanye ADSL (Yezi Digital Umbhalisi Line) Iimodem eziveliswa iinkampani ezifana Netgear, D-Link, Du-Link, Nabanye. Console ulawulo lwezi imizila zingafumaneka ngokundwendwela eli 192.168.0.1 Idilesi ye-IP kwi browser yakho.
Njani ukuba ungene ku 192.168.0.1?
➥ Okokuqala, Dibanisa umzila Computer yakho okanye kwi laptop yakho nge i unxibelelwaniso ngeengcingo okanye wireless.
➥ Okulandelayo, ukuvula nayiphi na ibhrawuza yeWebhu kwi computer yakho ngesandla chwetheza kwidilesi 192.168.0.1 kwi bar idilesi umkhangeli ngoko emva kokuba cofa ufake, yaye uya kubona iphepha lokungena.
➥ Kule phepha, ungafaka igama lomsebenzisi eli lungileyo kunye negama lokugqitha.
➥ Ukuba ulibale kwaye musa ukuba igama lomsebenzisi umzila kunye nephasiwedi, ke Nceda ngenisa igama lomsebenzisi kunye Password "Admin" kuzo zombini ezo amasimi kuba yiyo le lomsebenzisi engagqibekanga kunye nepaswedi ezininzi imizila.
I Ayikwazi Ngena ku kumzila My, Kwenziwe ntoni?
Ukuba ukuchwetheza 192.168.0.1 waya ibrawuza kodwa ayisebenzi ke 192.168.0.1 ayikho idilesi ye IP umzila wakho
Indlela elungileyo ukufumana Idilesi yakho ilungile IP:
➥ Ukuba usebenzisa i Mac - Hamba zokusebenza > eyenzelwa > Indawo yokukhwelela. Xa sele ku Terminal, uhlobo"ipconfig" yaye > ufake.
➥ Ukuba usebenzisa Windows - Yenza uphendlo kwi computer yakho ye Umyalelo imiz: (Cmd) . Xa ibhokisi umyalelo ivuliwe, uhlobo "ipconfig" yaye > ufake.
Indlela Yokumisela Up Wireless umzila For The Ixesha Lokuqala?
➥ Okokuqala, ukuqhagamshela ikhompyutha yakho umzila kwakho ne LAN (inethwekhi yendawo) wire.
➥ Ngoku ukuvula umkhangeli zincwadi ze computer yakho uze ufake https://192.168.0.1 kwi bar yedilesi.
➥ Uya kuvela iphepha lokungena. ngoku
➥ Ngoku ngenisa igama lomsebenzisi olungagqibekanga kunye lokugqitha ebhaliweyo kwi umzila.
➥ Okulandelayo uqalise umzila wakho uze usete SSID (Service Set isikhombi) igama. Kuya kuba igama umzila wakho, ukuba uya eboniswe ngayo kwezinye izixhobo.
➥ ke Beka igama lokugqitha Izicwangciso Ukhuseleko Network.
➥ Ngoku, nqakraza kwiqhosha Elandelayo.
➥ Wujike umzila ngexesha elinye ngaphezulu ukuze ugcine useto.
➥ Ngoku, ungakwazi ukukhangela womnatha wakho engenazingcingo Service Set isikhombi (SSID) gama kwi laptop yakho okanye ifowuni. Ngoku Faka igama lokugqitha, kwaye ziza kuqhagamshelaniswa uqhagamshelo kumzila wakho intanethi.
Cwangcisa i ingcambu loga igama Ngokuba D Link Wireless kumzila
➥ Okokuqala uvule ibrawuza ufake https://192.168.0.1 kwi bar yedilesi.
➥ nqakraza Okulandelayo kwi mauntenance iqhosha
➥ koko nqakraza kwi i iQhosha lika Admin
➥ Ngoku utshintshe iphasiwedi yakho
➥ Emva ukutshintsha igama nqakraza kwi iqhosha Guqula.
➥ Ngoku ungene ngegama lokugqitha elitsha.
Ndicinga ukuba kufuneka sibe nolwazi olwaneleyo malunga 192.168.0.1 Ngema. Ndiyathemba ukuba zonke iintlobo ulwazi luluncedo na kodwa ukuba ibheke nayiphi na ingxaki malunga le post, ke nceda uphawule ngokuba thina siya kuzama ukuyisombulula ingxaki yakho ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka. Enkosi ngokundwendwela iwebhsayithi yethu.
Previous Post:192.168.1.1 || Indlela ukuze ungene ngemvume 192.168.1.1 Idilesi IP?
Post Next:Yintoni i 192.168.0.0 Idilesi IP?